Faallooyinka Caymiska Xayawaanka Trupanion 2021 | Faa'iidooyinka & Qasaarooyinka | Siduu U Shaqeeyo
Bogga ugu weyn Faallooyinka Caymiska Xayawaanka Trupanion 2021 | Faa'iidooyinka & Qasaarooyinka | Legit & Fadeexad | Siduu U Shaqeeyo
Faallooyinka Caymiska Xayawaanka Trupanion 2021 | Faa'iidooyinka & Qasaarooyinka | Legit & Fadeexad | Siduu U Shaqeeyo
isha sawirka: www.pexels.com
Caymiska xayawaanka ee Trupanion wuxuu bixiyaa caymis dhammaystiran oo sannadle ah oo aan xadidnayn kaas oo bixiya boqolkiiba sagaashan magdhawga macaamiisheeda. Shirkaddu waxay u taagan tahay adeeggeeda macmiilka oo aad u fiican, in kastoo, lacag -bixinnadeedu aad qaali u yihiin.
Haddii aad raadinayso qorshe sahlan oo dabooli kara bisaddaada iyo eeygaaga labadaba, qorshaha kaliya ee Trupanion wuxuu u adeegaa ujeeddada.
Waxaa jira dib -u -eegisyo badan oo caymiska xayawaanka Trupanion oo laga heli karo intarneedka kuwaas oo wax badan ka sheegaya shirkadda. Si kastaba ha noqotee, haddii aad la yaabban tahay sida ay shirkaddu sharci u tahay ama haddii ay u qalanto isku dayga, markaa sii wad akhriska ilaa dhammaadka.
Darryl Rawlings ayaa Trupanion ka aasaasay Canada sanadku markuu ahaa 1999. Sannadkii 2005, shirkaddu waxay ballaarisay oo hawlgalkeedii geysay Maraykanka halkaas oo ay kaga hadhay tartamayaasha ugu sarreeya marka ay timaaddo caymiska xayawaanka maanta.
Sannadkii 2007, shirkaddu waxay heshay Shirkadda Caymiska Xoolaha ee Maraykanka, oo u xilsaaran hoos -u -dhigga siyaasaddeeda Maraykanka. Dhawaanahan 2019, shirkaddu waxay hawlaheeda u qaadday Australia halkaas oo waxqabadkeedu sidoo kale sumcad ku leeyahay.
Bilowgii, Trupanion wuxuu sumcad ku lahaa bixinta caymis dhammaystiran ee shilalka iyo jirrooyinka xayawaanka iyada oo loo marayo aqbalaadda sheegashooyin badan, oo aan ku jirin warshadaha caymiska xayawaanka muddadaas.
Tilmaan -bixintan, Trupanion waxay u dejisay heer cusub tartamayaasha ugu sarreeya warshadaha caymiska xayawaanka maanta. Iyada oo koboc joogto ah oo xoog shaqaale ah sanadihii la soo dhaafay, shirkaddu waxay hadda u xamili kartaa in ka badan 850 shaqaale oo leh kumanaan siyaasad -ilaaliyeyaal ah iyo xayawaankooda sida macmiilkooda.
Websaydhyada sida thisoldhouse.com dhibcaha shirkadda 89.5 ka samee 100 dhowr arrimood oo ka kooban:
Bixinta aan xadidnayn
Tayada adeegga macaamiisha
Awoodda helitaanka lacag -bixin toos ah dhakhaatiirta xoolaha
US News iyo World Report ku qiimee lambarka Trupanion 2 ee liiska shirkadaha caymiska xayawaanka ugu fiican sannadka 2021.
Si ka duwan shirkadaha caymiska xayawaanka ee caadiga ah, Trupanion waxay u haysaa qiime isku mid ah xayawaankaaga xitaa markay weynaadaan. Si kastaba ha noqotee, shirkaddu waxay sheegaysaa in kororka lacagta sanadlaha ah ay dhici karto iyadoo ay sabab u tahay kororka kharashaadka xoolaha iyo adeegsiga. Markay timaaddo caymiska xayawaanka ee Trupanion, ma jiraan wax xaddidan oo sannadle ah oo lagu dalbado lacag-bixinta. Sidaa darteed, Trupanion ayaa bixin doonta kharash kasta oo daaweyn ah oo loogu talagalay xayawaankaaga (ilaa 90% ka dib xulashada jar -jaryada sannadlaha ah). In kasta oo caymisyo badan oo caymis ah ay meeleeyaan sheegashooyinka macaamilka ee lagu bixiyo koofiyadda sanadlaha ah iyo sidoo kale leh xaddidaad lacageed oo kala duwan ee noocyada dhaawacyada kala duwan, Trupanion ma laha.
Trupanion waxay leedahay muddo sugitaan oo ah shan maalmood ka dib markaad dalbato siyaasadda dhaawaca iyo soddon maalmood cudurrada.
Hadda, Trupanion waxaa laga heli karaa konton gobol oo ay ku jiraan Canada, Washington DC, iyo Puerto Rico. Si kastaba ha ahaatee, qiimaynta iyo shuruudaha ayaa laga yaabaa inay ku kala duwan yihiin hadba meesha aad joogto.
Tusaalaha wanaagsan waa hab lagu iibsado daboolka caymiska, kaas oo ka duwan marka aad isbarbardhigto Florida gobolada kale. Iyada oo qayb ka ah geeddi -socodka, dadka deggan Florida waa inay soo gudbiyaan warbixintooda caafimaadka xoolaha 12 -kii bilood ee la soo dhaafay ka hor bilowga diiwaangelintooda.
Sidaa darteed, waxaa lama huraan ah in la maro shuruudaha looga baahan yahay gobol kasta kahor intaan la qorin.
Qorshayaasha Caymiska Xayawaanka Trupanion
Trupanion waxay bixisaa hal qorshe oo daboolaya shilalka iyo cudurada sida:
Shil: lafo jabay, dhaawac ilkaha, caabuq, matag, caabuq, iyo shuban, iwm.
Cudurada: sonkorowga, cudurka tayroodh, cudurrada wadnaha, xasaasiyadda, suxulka iyo dysplasia misigta, caabuqyada neef -mareenka sare, arrimaha habdhiska neerfaha, iyo cudurrada beerka, iwm.
Sida uu qabo qorshaha Trupanion, kuwa soo socda ayaa ah tusaalooyinka hababka iyo daaweynta ay shirkadda caymisku daryeesho;
Nidaamyada sida qalliinka, ilkaha, iyo baaritaannada ogaanshaha waxaa lagu daboolay qorshaha Trupanion.
Trupanion wuxuu kaloo daboolayaa alaab -qeybiyeyaasha sahayda xoolaha, isbitaal dhigista xayawaanka guriga, daryeelka kaabayaasha caafimaadka xoolaha, qiimaha aaladaha suuxinta, lacag bixinta daaweynta geedaha, lacag bixinta dawada loo qoray, iyo konton boqolkiiba qiimaha cuntada dhakhtarku qoro halka ay khuseyso.
Trupanion sidoo kale waxay bixisaa laba dabool oo dheeri ah, kuwaas oo ah:
Xidhmada caawinta milkiilaha xayawaanka: si ay uga caawiso milkiilayaasha xayawaanka daryeelka daryeelka kharashyada lama filaanka ah ee laga yaabo inay dhacaan inta lagu jiro daryeelka xanaanada xayawaankaaga. Waxay ka mid yihiin kharashyada sida:
Xayaysiinta iyo bixinta xayawaanka lumay
Lacagta lagu raaco
Gubid ama aasid xayawaan dhintay
Caymiska mas'uuliyadda waxyeelada hantida dhinac saddexaad
Khidmadaha lagu daboolayo joojinta Fasaxa
Soo -kabashada raaciyaha daryeelka dheeraadka ah: u gaar ah daboolid dhammaystiran oo ku lug leh dhaqan aan caafimaad ahayn sida:
Daaweynta dib u habeynta dabeecadda
Ka -reebitaanka Caymiska Trupanion
Waxaa jira waxyaalo ka reeban caymiska siyaasadda Trupanion. Mid ka mid ah ka -reebitaannadaas waxaa ka mid ah daboolidda dhaawac kasta ama jirro leh calaamado ama astaamo lagu arki karo 18 bilood gudahood ka hor taariikhda caymiska caymiska.
Dhaawacyada/ shilalka dhaca shanta maalmood ee sugitaanka iyo jirrooyinka dhaca soddon maalmood gudahood muddada sugitaanka sidoo kale ma daboolin Trupanion.
Waxa kale oo jira ka -reebitaanno kale, kuwaas oo ah:
Muujinta qanjidhada dabada
Lacagaha taranka iyo uurka
Hababka doorashada iyo qurxinta
Dhaqdhaqaaq dhexdhexaad ah ama buufin
Kharashka habaynta gudbinta taariikhda caafimaad awgeed
Kharashyada ka yimid gaadiidka xayawaanka
Caymiska Xayawaanka Trupanion: Sida Uu U Shaqeeyo
Qiimeynta caymiska Trupanion wuxuu la shaqeeyaa meeshaada, nooca xayawaanka rabaayada ah iyo tarankiisa, cabbirka, da'da, iyo doorashadaada wax -goynta. Dadka leh siyaasad -dejintu waxay xor u yihiin inay wax ka beddelaan ka -jaritaankooda khidmadaha u dhexeeya $ 0 illaa $ 1,000.
Sida laga soo xigtay dib -u -eegista caymiska xayawaanka ee Trupanion, qiimaha billaha ah ee Ride -ka -kabashada iyo Daryeelka Dhammeystiran way kala duwan tahay iyadoo ku xiran nooca xayawaanka. Si kastaba ha ahaatee, Xidhmada Caawinta Milkiileyaasha Xayawaanka waa $ 4.95 bishiiba (flat-rate). Faahfaahinta xayawaankaagu ma saamaynayso xirmadan.
Bixinta Dhimista Trupanion
Trupanion waxay bixisaa qiimo dhimis 5% ah gargaarka u qalma ama xayawaanka daweynta. Si kastaba ha ahaatee, xayawaanka taageerada shucuurtu uma qalmaan sicir -dhimista iyo sidoo kale saamileyda siyaasadda iyo xayawaanka Washington.
Dadka leh siyaasadaha Florida waxay yarayn karaan kharashaadka marka ay kala doortaan saddex qorshe magdhow oo lacag bixin ah, kuwaas oo ah boqol, sagaashan, ama boqolkiiba toddobaatan iyo shan. Dawladaha kale waxay leeyihiin 90% heerka magdhowga caymiska.
Akhri: Dib -u -eegista Caymiska Nolosha Globe
Faa'iidooyinka Trupanion iyo Qasaarooyinka
Ma jiraan wax xadidan lacagaha Trupanion
Lacag -dhimisyada sannadlaha ah ee bilaashka ah
Wuxuu bixiyaa ikhtiyaarrada daaweynta baxnaaninta ama daboolidda daryeel dhammaystiran.
Waxay siisaa kaalmada milkiilaha xayawaanka si loo daboolo kharashaadka dhici kara sida waxyeelada hantida ee xayawaanka, abaalmarinta xayawaanka lumay/la xaday, iyo xayaysiinta xayawaanka.
Waxay u oggolaanaysaa lacag -bixin toos ah isbitaallada xoolaha si ay saamileyda siyaasaddu u bixin karaan marka la bixinayo.
Caymiska Trupanion ma daboolayo ladnaanta xayawaanka
Ma jiro qiimo-dhimis loogu talagalay macaamiisha leh wax ka badan hal xayawaan ama kuwa bixiya lacago hore oo loogu talagalay siyaasaddooda (badiyaa, shirkaddu waxay aqbashaa oo keliya lacag-bixinta billaha ah. Sidaa darteed, waxaa laga yaabaa inaysan suurtogal ahayn in la bixiyo lacago hore).
Ikhtiyaarada habaynta ayaa ku yar Trupanion
Trupanion Caymiska Xayawaanku ma Xalaal buu Yahay ama Fadeexad?
Ka sokow khidmadaha qaaliga ah ee sarreeya, mid ka mid ah sababaha ugu muhiimsan ee ay dadku ugu muuqdaan inay ka fogaadaan Trupanion ayaa ah in kasta oo sannado badan Shirkadda Caymiska Xayawaanka Ameerika ay mas'uul ka ahayd in la qoro siyaasadaha caymiska xayawaanka ee Trupanion.
Shirkadu kama muuqato mid ka mid ah hay'adaha qiimeynta amaahda siyaasadaha waaweyn sida Moody's iyo AM Best.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa laga yaabaa inay xiiso kuu leedahay inaad ogaato in shirkadda lagu qiimeeyay A (Ka -reebitaan) Demotech, oo ah shirkad falanqayn maaliyadeed leh mas'uuliyadda koowaad ee qiimeynta xasilloonida maaliyadeed ee shirkadaha.
Nasiibdarro, inaanan ka muuqan goob kasta oo qiimeyn weyn ma aha dhibaatada kaliya ee hortaagan shirkadda caymiska. Waxaa sidoo kale jira arrimo soo noqnoqda oo gaar ahaan ku saabsan sida siyaasadaha looga iibiyo Trupanion.
Labadii sano ee la soo dhaafay, BBB waxay ka sheekeysay laba ficil oo dowladda ka dhan ah shirkadda caymiska laba sano gudahood, mid California iyo kan Washington.
Labada xaaladoodba, Trupanion waxaa laga helay rabitaanka hubinta in wakiillada iibka si habboon ruqsad loo siiyo.
Mar labaad, Washington, shirkaddu waxay sidoo kale dhibaatooyin badan kala kulantay guddoomiyaha caymiska saddex ganaax oo kala duwan.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa muhiim ah in la xuso in arrimahani ay inta badan la socdaan iibiyaha dhinac saddexaad oo aanay saamayn doonin kuwa si toos ah uga iibsanaya siyaasaddooda shabakadda Trupanion.
Ma wiiqin arrimaha kala duwan ee Trupanion, shirkaddu waxay caan ku ahayd sanadihii la soo dhaafay. Inaad raacdo dib -u -eegista caymiska xayawaanka ee Trupanion ee kala duwan ee laga heli karo onlayn, shaki kuma jiro in shirkaddu sharci tahay.
Iyada oo ay ka hawlgalaan in ka badan konton gobol iyo xarumo adeeg oo laga arki karo gobollo badan, mid dambe uma baahna inuu ka shakiyo haddii shirkadu dhab tahay.
In kasta oo dhibaatooyin kaladuwan ay soo bixi karaan, oo ah nooca caymiska, haddana shirkaddu waxay caan ku tahay bixinta adeeggeeda aadka u wanaagsan.
Ku qiimeynta qiimaha wajiga, Trupanion waxay bixisaa qaar ka mid ah shuruudaha siyaasadda ugu fiican ee warshadaha caymiska xayawaanka oo leh qorshayaal qiimo jaban oo la awoodi karo. Si kastaba ha ahaatee, waxaa lama huraan ah in la fahmo in xulashada dhimisyada hoose ay sababi doonto in lacagta caymiska ay noqoto mid aan macquul ahayn qaali (ka sarreysa tartamayaasha kale).
Sidoo kale, la'aanta fayoobaanta iyo daboolidda ka -hortagga ee xayawaanka rabaayada ah ayaa laga yaabaa inay dadka qaar dhabar jab ku noqoto.
Si kastaba ha ahaatee, caymiska xayawaanka ee Trupanion wuxuu ku habboon yahay kuwa aan lahayn shuruudo gaar ah marka laga reebo ilaalinta marka ay dhacaan dhacdooyin aan la filayn.
Taa bedelkeeda, haddii aad damacsan tahay inaad u isticmaasho qorshahaaga caymis muddo dheer si aad u daryeesho xayawaankaaga, markaa waxaad tixgelin kartaa ikhtiyaar kale.
Maqaalkani wuxuu soo bandhigayaa Faallooyinka Caymiska Xayawaanka ee Trupanion. Waxaan rajeyneynaa inaad ka heshay akhriska?
Dib u eegista Caymiska Liinta: Faa'iidooyinka & Qasaarooyinka | Legit & Fadeexad | Siday tahay
Sannadka 2021 -ka, Caymiska Caafimaadka ee Paws Healthy wuxuu lahaa qaybtiisa dareenka ah. Waxaa lagu qiimeeyay…
In kasta oo baabuur wadidku yahay mid madadaalo leh, ka qayb qaadashada shil maaha wax xiiso leh! Darawalada cusub ayaa had iyo jeer soo jeeda tan iyo markii…
Si aan u daboolno rabitaankeena aan xadidneyn, waxaan u baahanahay inaan qorsheyno. Tani waa sababta oo ah agabyada la heli karo si aan ula kulanno…